गृहपृष्ठ » साहित्य » कलेजकी केटी
आईतबार ७ भदौ, २०७७
पढ्न लाग्ने समय:9minutes
सधैँजस्तै कार्यक्रम सकिएपछि नजिकैको कफी सपमा अतिथि कविसँग कफी पिउँदै थिएँ ।
नमस्ते सर ! एक्कासी एक यौवना जम्लाहात गरेर सामुन्ने खडा भई ।
मैले पनि नमस्ते फर्काएँ । तर, चिनिनँ ।
आधुनिक स्टाइलको रङ्गीन र सिल्की कपाल । आँखाका दुबै छेउबाट गाजलको रेखा अलि पर निस्किएको । गर्मीको समय भएकोले होला शरीरमा थोरै कपडा, जिन्सको छोटो कट्टु । कम्मरमाथि खोपिल्टो पूरै देखिएको । थोरै प्रतिशत मात्र ढाकिएका छातीे । छड्के भिरेको लेदरको सानो कालो व्याग । खुट्टामा मोजाबिनाका कपडाका जुत्ता । पाकेको किम्बु जस्तै हल्का काला, रसिला ओठ र नशालु मुस्कान ।
उसलाई तलदेखि माथिसम्म पटक–पटक नियाल्दा मेरा हात त जोडिएका जोडियै भएछन् ।
“सरले मलाई चिन्नुभएन जस्तो छ ।” मसक्क मस्कँदै उसले भनि ।
मैले सर्माएझैँ भने “हँ, चिनिनँ त !”
“दुई–तीन वर्षमै बिर्सिनु भको ?
म जेनिसा होइन ?
तपाईंले ट्रिनिटी कलेजमा पढाउनुभको ।”
“ए लु चिनें”
“के गछ्र्यौ ?
कता पढ्छ्यौ ?
अनि याँ कताबाट ?”
मैले एकै चोटि अचम्म मान्दै सोधें ।
“के गर्नु सर, ट्रिनिटी त सुरुमा राम्रै थियो । पछि अनावश्यक टाइट गर्न थाल्यो । त्यो कलेज छोडेर अन्तैबाट प्लस टु सकें । अहिले बि. बि. ए. पढ्दै छु । सरले पढाको खुब मन पथ्र्यो । हँसाइ–हँसाइ पढाउनु हुन्थ्यो । अरूलाई नसम्झे पनि सरलाई सम्झिराछु ।”
उसले सबै कुरो उभिएरै भनी ।
“सम्झेकोमा धन्यवाद जेनिसा !”
“वेलकम सर !”
यति भनेर ऊ क्याटवाकको लयमा कुनाको टेबलतिर लागी । त्यहाँ भर्खरै दुईटा केटा आएर बसेका थिए । उसले दुईटैसँग हग गरी । तिनीहरूले कफी अर्डर गरे । चुरोट मागे। म पूर्ववत् कफी पिउन लागें ।
डिल्लीबजार कालिकास्थान मन्दिरको सामुन्ने गोर्खा एफ. एम. को स्टुडियो । त्यसमा सुरुमा शनिवार र पछि बिहिबार बिहान आठ बजेदेखि नौ बजेसम्म म साहित्यिक कार्यक्रम चलाउँथे र कार्यक्रममा आएका अतिथिसँग एफ. एम. अगाडिको ‘अमोघ क्याफे’ मा केही समय कफी गफ चल्थ्यो । बस्ने ठाउँ भित्र पनि थियो र बाहिर पनि । पछाडिपट्टि खुला थियो । दुई–चारवटा स–साना भोगटे, सुन्तला र अम्बकका रुखहरू थिए । त्यसैले बिहानको समय घाम ताप्न र दिउँसो शीतलको लागि मान्छेहरू बढी त्यतै बस्थे । विशेष चुरोट तान्न पाइने भएकोले प्रायः ठिटाठिटीहरू बाहिरै हुन्थे ।
महिनाको अन्तिम दिन रचना वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेकोले त्यस दिन रेडियोमा अतिथि थिएनन् । त्यसैले म एक्लै कफी पिइरहेको थिएँ ।
घरि–घरि भित्ताको टेबलतिर नजर दौडाउँदा तिनीहरू बहुत इत्तरिरहेका र एक–अर्कालाई हातले प्याट–प्याट हान्दै खित्खिताइरहेका देखिन्थे । एउटाले तानेको चुरोट अर्काले तान्थ्यो । केटा त तान्थे तान्थे, उप्परखुट्टी लाएर केटी पनि स्वाँइ..य पार्थी र नाकका पोरा फुलाएर धुवाँको मुस्लो निकाल्थी । म नदेखे जस्तो गरेर आँखा अन्तै डुलाउँथें ।
“आपूmलाई पढाउने शिक्षकको अगाडि अलिकति पनि मानभाउ नराख्ने यो कस्ती केटी हो ? हुन त अचेलका केटाकेटीहरू हाम्रो जमानाका जस्ता कहाँ छन् र ?” म मनमनै चित्त बुझाउँथें ।
रेडियो कार्यक्रम सकेर कफी पिउन आउँदा प्रायः जसो त्यो केटी त्यही भेटिन्थी । केटाहरू कहिले तिनै हुन्थे, कहिले अरू । उत्ताउलो हाउभाउका साथ तिनीहरू चुरोट तान्दै र कफी पिउँदै गफमा मस्त हुन्थे । जेहोस् भेट हुँदा नमस्ते गर्न भने ऊ चुक्तैनथी ।
वर्ष दिन जति भयो जेनिसासँग भेट भएको थिएन । त्यो क्याफेमा म आउने नियमित दिन र समय उसलाई हेक्का भइसकेको थियो । सायद त्यो समय बाहेक अरू नै बेला आउँथी कि !
एक चोटि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको दिन ठमेलमा राति केही बेरसम्मको चहलपहल हेरौं र हल्का मनोरञ्जन पनि गरौं भनेर म श्रीमती सहित गएको थिएँ । केही समय वरपरको दृश्य हेर्दै सडक नापेपछि सात बजेतिर हामी गामबेंसी दोहोरीमा छि¥यौं र त्यसपछि नजिकैको एउटा गजल रेष्टुरेन्टमा गयौं । श्रृङ्गारिक गजलको प्रस्तुतिले होटलको वातावरण रोमाञ्चक भइरहेको थियो । एकातिर कुनामा बसेर हल्का पेय लिंदै गर्दा अर्को कुनामा मैले एउटा चिनेको अनुहार देखें उही जेनिसा ! अर्धनग्न अवस्थामा दुई जना केटाहरूका साथमा थिई ऊ । के के थरी स्न्याक्सका साथ तिनीहरू बियर तानिरहेका थिए । तिनीहरू एउटाको बियर अर्काले पिउँथे । लगत्तै अङ्गालो मारेर ओठ जोड्थे । हात कता–कता निषेधित क्षेत्रतिर पनि पु¥याउँथे । अनि बीचमा उठेर नाच्न जान्थे । सुरका तालमा नाच पनि त्यस्तै ! जेनिसा पाँ–पाँच सयका नोटहरू गाउनेतिर हु¥याइदिन्थी । यस्तो देख्ता ऊ धनाढ्यकै छोरी हो भन्ने लाग्थ्यो । नाच्दा–नाच्दै थाकेपछि उही पुरानै ठाउँमा बसेर तिनीहरू उही हर्कत दोहो¥याउँथे । फेरि नाच्न जान्थे । आएर उसै गर्थे ।
ठमेल दिउँसोभन्दा राति जागा हुने ठाउँ । त्यसमा पनि नयाँ वर्षको बेला त झन् विशेष चहल–पहल । बाहिर सडकदेखि लिएर डान्सबार र दोहोरी साँझहरूमा तन्नेरीहरूको बढ्ता नै घुइँचो । आखिर त्यहाँ रमाइलो गर्न र रमाइलो हेर्नै जाने हो । त्यहाँ पनि अन्त जस्तै कोही आफ्नै पार्टनरसँग, कोही साथीहरूको समूहमा र कोही परिवारसँग रमाइरहेका थिए । सबै मस्तसँग खाइरहेका, पिइरहेका, नाचिरहेका ।
जे होस् जेनिसाले मलाई देखिन । श्रीमतीसँग बसिरहेको मैले पनि उसलाई हेरिरहने कुरै भएन । उही घरि–घरि आँखा गएको मात्र हो ।
वातावरण अरू तात्दै र मात्दै गइरहेको थियो । एक–डेढ घण्टाको बसाइपछि हामी त्यहाँबाट बाटो लाग्यौं ।
जेनिसा कस्ती केटी हो ? पढ्दै छु पनि भन्छे । बाउ–आमा के गर्छन्, कहाँ छन् ? हुन त पहिला भेट हुँदा मैले यी कुराहरू सोधिनँ । तर मनमा भने लागिरह्यो – “हन, यो केटी किन यति बिघ्न निस्फिक्री र स्वतन्त्र छे ?”
त्यसको पाँच–छ महिनापछिको कुरा हो । एक दिन म बेलुका पाँच बजेतिर चावहिलमा घर फर्किनको लागि गाडी पर्खिरहेको थिएँ । ट्राफिकले एकतिर रोकी अर्कोतिर गाडी पास गरिरहेको थियो । त्यही गाडी रोकिएको बेला अचानक एउटा पुलिसको भ्यान मेरो अगाडि आयो । गाडीको पछाडिपट्टि खुला ठाउँमा केही थान कुण्डले केटाहरू थिए। तिनको बीचमा एउटी केटी थिई । आँखा पुगिहाले, यसो हेरेको त केटी त त्यै जेनिसा पो रहिछ । उसले पनि कसो–कसो मलाई देखिहाली । हाम्रा आँखा जुधे । उसले हतार–हतार शीर निहु¥याई ।
म जेनिसालाई सम्झेर र उसको हालत देखेर त्यस दिनभर रन्थनिरहें । राति अबेरसम्म पनि उसको तस्वीर मेरो अगाडि आइरह्यो– घरि चुरोट तान्दै गरेको । घरि बियर पिउँदै गरेको । घरि केटाहरूसँग ओठ जोड्दै गरेको । घरि पैसा फाल्दै नाच्दै गरेको ।
समय क्रमसँगै जीवनमा पात्रहरू कति जोडिन्छन् । कति छुट्टिन्छन् । कोही स्मृतिमा रहिरहन्छन् । कोही विस्मृतिमा गायब हुन्छन् ।
केही समयसम्म त जेनिसालाई सम्झिरहें । ऊ सुध्री कि त्यस्तै छे ? कि जेलमा छे ? एउटी कल्कलाउँदी केटी जसको अगाडि लामो भविष्य छ । धेरै सम्भावनाहरू छन् । तर, ऊ किन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गई ? बढी नै स्वतन्त्र भई । अभिभावकहरूले बेलैमा किन सही बाटोमा हिंडाउन सकेनन् ? थोरै समय भए पनि ऊ आफ्नो विद्यार्थी भएको नाताले बेला–बेला यी कुराहरू मनमा आइरहे ।
समय आफ्नै गतिमा बगिरहेको थियो । म आफ्नै लयमा हिंडिरहेको थिएँ ।
एक दिन चक्रपथ भाटभटेनी अगाडि लुखुर–लुखुर हिंडिरहेको बेला कसैले बोलायो–
‘टङ्क सर !’ त्यो मीठो आवाज महिलाको थियो । यताउति हेरें ठम्याउन सकिनँ ।
ठ्याक्कै अगाडि एउटा गाडी रोकियो ।
“सर नमस्कार !” गाडीको झ्याल खोलेर एउटी महिलाले नमस्कार गरिन् । नचिनेकोले अकमक्क पर्दै मैले नमस्कार फर्काएँ ।
उनले चालकलाई गाडी छेउ लाउन भनिन् र गाडीबाट ओर्लिन् ।
राम्रो अनुहार । अग्लो ज्यान । टाउकोमा कालो चस्मा । जीउमा सारी–चोलो खुब सुहाएको ।
म हेरेको हेरै भएँ ।
“सरले मलाई पक्कै पनि चिन्नुभएन ।” मन्द मुस्कान फाल्दै उनी बोलिन् । मैले एकछिन सम्झन बल गरिरहें तर, सकिनँ । अनि भनें– “लु मलाई गा¥है भो !”
“म जेनिसा क्या सर ! सरले मलाई ट्रिनिटीमा पढाउनुभको ।” उनले कुरा खोलिन् ।
“ए जेनिसा ! डिल्लीबजारमा पनि भेट भाको थियो !”
“हो सर ⁄ अब चिन्नुभो ।”
“सरसँग एकछिन समय छ भने कफी पिऊँ न ! ” अगाडिको रिचबन्ड क्याफेतिर हेर्दै उनले अनुरोध गरिन् ।
“हुन्छ ।” मैले स्वीकृति जनाएँ । हामी त्यही क्याफेभित्र छि¥यौं ।
“सर अरू केही खाऊँ ?”
“हैन, कफी मात्रै ।”
उनले दुईटा कफी अर्डर गरिन् । “सर पढाउँदै हुनुहुन्छ ?” बात मार्ने मेलो सुरु भयो । “अहिले छोडें । अरू नै काम गर्छु ।” “सर त लेख्नु पनि हुन्छ । कहिले–कहिले पत्रिकामा आर्टिकल पढ्छु ।” “हो । अनि तिमी के गछ्र्यौ त आजकल ? धेरै वर्षपछि भेट भयो । मैले त ठम्याउनै सकिनँ । तर, तिमीले चिन्यौ ।” मैले भने । “हो सर ! सरसँग भेट नभएको सात–आठ वर्ष नै भयो होला । म अहिले सामाजिक काममा लागिरहेकी छु । सरलाई मैले धेरै कुराहरू भन्नु छ किनभने सरले मलाई प्रहरीको भ्यानमा दुव्र्यसनी केटाहरूसँग देख्नुभएको थियो ।” उनी गम्भीर भइन् । टेबलमा कफी आयो । मलाई कुरा सुन्ने उत्सुकता जाग्यो ।
“सर, म ट्र्याकबाट बाहिर गइसकेकी थिएँ । त्यो उमेर त्यस्तै रहेछ । कन्ट्रोल गर्न सकिनँ । अहिले यो अवस्थासम्म आउँछु भन्ने त कल्पना पनि थिएन । मैले सरकै अगाडि केटाहरूसँग डिल्लीबजारमा चुरोट तान्दा नै थाहा पाइसक्नुभएको थियो होला । फेरि मैले सरलाई प्लस टु सकेर बि. बि .ए. पढ्दै छु पनि भनें । वास्तवमा मैले त्यो बेला प्लस टु नै सकेकी थिइनँ । सरलाई ढाँटेकी हुँ । म ट्रिनिटी पढ्दै बिग्रिसकेकी थिएँ । त्यसैले बीचैमा कलेज छोडें । म बिग्रिनुको खास कारण के हो भने सर, मेरा बुबा–आमा अमेरिका हुनुहुन्थ्यो । काखको भाइ पनि उतै थियो । मलाई भने प्लस टु सकेर लाने योजना थियो । म यता होस्टलमा बसेकी थिएँ । यताका आफन्तहरू कहिलेकाहीं भेट्न आउनुहुन्थ्यो। बिदा भएको बेला म पनि जान्थें । सुरुमा त मेरो पढाइ राम्रै थियो । तर, बिस्तारै पढाइतिर रुचि जान छोड्यो । कलेज बङ्क गरेर केटा साथीहरूसँग हिंड्न थालें ।
चुरोट पिउन थालें । पैसाको कमी थिएन । अमेरिकाबाट बुबा–आमाले जति पनि पठाइदिने । म मात्र यता भएकोले उहाँहरूलाई मेरो मायाले निकै सताएको थियो । तर मलाई खराब लत लागिसकेको कारण बुबा–आमाको भावना बुझ्न सकिनँ । विभिन्न बहाना बनाउँदै उहाँहरूलाई झुक्याइरहें । बिस्तारै केटाहरू फेर्दै हिंड्न थालें । केटीहरूको त संगतै गर्दिनथें । पछि–पछि त वाइन–बियर हुँदै विभिन्न ब्राण्डका रक्सीहरू पनि खान थालियो । हुँदा–हुँदा पछिल्लो अवस्थामा लागू पदार्थको दुव्र्यसनी नै भएँ । एकचोटि केटाहरूसँग दिउँसै खुला चौरमा इन्जेक्सन हानिरहेको बेला प्रहरीले पक्रेर लग्यो । कति कुट्यो भनी साध्य छैन । रातैभरि चिसो भुइँमा बस्नुप¥यो । त्यही दिउँसो पुलिसले पक्रेर लगेको बेला सरले मलाई देख्नुभको हो । मैले पनि सरलाई देखें । निकै शरम लागेर आयो । यो कुरा बुबा–आमाले थाहा पाएपछि आफन्तलाई भनेर रिहाब सेन्टरमा राख्न लाउनुभो । त्यहाँ छ महिना बसेपछि म पूरै रिफ्रेस भएँ । यो मेरो पुनर्जन्म हो ।
अब नयाँ जीवन बाँच्छु भन्ने सोचाइ आउन थाल्यो । बुबा–आमा पनि पछि अमेरिकाबाट आउनुभो । रिहाबबाट निकालेर घर लानुभो । अमेरिका जान धेरै कर गर्नुभो । तर मैले मानिनँ । अब नेपालमै केही गर्छु । यो पुनर्जन्म सार्थक पार्छु । तपाईहरूको गुमेको प्रतिष्ठा फिर्ता गरी समाजले गर्व गर्न लायक बन्छु । बरु, तपाईंहरू मलाई सहयोग गर्नुस् भनेर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरें । त्यसपछि अहिले सात वर्ष भयो जोरपाटीमा एउटा पुनस्र्थापना केन्द्र खोलेर काम गरिरहेकी छु । कसो भगवानको कृपाले ‘एड्स’ चाहिं लागेनछ सर !” यति भनी सकेर उनी हल्का मुस्कुराइन् ।
उनका कुरा सुन्दा मलाई एउटा पूरा सिनेमा हेरे जस्तो भयो ।
“जेनिसा ! तिमी त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेर पनि अहिले यो अवस्थामा आयौ । समाजका लागि उदाहरणीय काम गर्दैछ्यौ । तिमीप्रति मलाई पनि गर्व छ ।” मैले बल्ल मुख खोलें ।
“अब सर पनि त्यहाँ आउनुपर्छ । म एकदिन बोलाउँछु ।” यति भनेर उनले मेरो सम्पर्क नम्बर लिइन् । मलाई उनको कार्ड दिइन् ।
बेलुका पाँच बजिसकेछ । उनले सरको साधन छैन भने म छोडिदिन्छु त भन्दै थिइन् । मैले पर्दैन भनें । पछि फेरि भेट्ने सल्लाहका साथ हामी त्यहाँबाट छुट्यौं ।
केही दिनपछि मोबाइलमा फोन आयो– “सर नमस्कार ! म जेनिसा बोल्दै छु । सर मेरो सुधार गृहमा आउनुप¥यो । कहिले आउने, नत्र म आफैं सरलाई लिन आउँछु ।”
“ठीक छ । म भोलितिर आउँछु । लिन आउन पर्दैन । अलमलिएँ भने फोन गरुँला ।” मैले उनलाई आश्वस्त पारें। उनले लोकेसन बताइदिइन् ।
म भोलिपल्ट दिउँसोतिर जोरपाटी स्थित उनको सुधार गृहतिर लागेँ । उनी अर्थोपेडिक हस्पिटल छेउसम्म लिन आइन् । त्यहाँभन्दा केही पर अलि भित्रपट्टि रहेछ ।
तीन रोपनी जग्गामा फैलिएको ‘जागरण सुधार गृह’ । तीनवटा भवन । एउटा अलि ठूलो र दुइटा त्योभन्दा साना । एउटामा अफिस, एउटामा दुव्र्यसनीहरू र अर्कोमा तल चमेना गृह र त्यसको माथि प्रदर्शनी तथा कार्यक्रमको लागि पुस्तकालय सहितको ठूलो हल । बाहिर थरिथरिका रुख–बिरुवा । फलपूmलका मनमोहक बगैंचा । खेलकुदको लागि छुट्टै ठाउँ । कर्मचारी, रेखदेखवाला, सुरक्षा गार्ड, खाना पकाउने, सरसफाई गर्ने लगायत विभिन्न कामको लागि चौध–पन्द्र जना जनशक्तिहरू ।
सुधार गृहमा बस्नको लागि सय जनासम्मको कोटा रहेछ । योग गर्ने, ध्यान गर्ने, खाने, खेल्ने, आफन्तसँग भेट्ने, कविता÷गीत÷मुक्तकहरू लेख्ने सुनाउने, नाच्ने, गाउने, चित्र कोर्ने लगायत बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्मको आध्यात्मिक, सिर्जनात्मक तथा मनोरञ्जनात्मक जस्ता विभिन्न क्रियाकलाप सहितको निश्चित समय सारिणी । जुन बाहिर ठूलो बोर्ड बनाएर सबैले देख्ने गरी राखिएको थियो । बगैंचा गोडमेल गर्ने, पानी हाल्ने कामहरू तिनै सुधार गृहका केटाकेटीहरूले गर्दा रहेछन् । अनि बेला–बेला त्यहाँबाट पूरै सुधारिएर गएका व्यक्तिहरू आएर स्वयं सेवा पनि गर्दा रहेछन् ।
उनले सुधार गृहका विभिन्न ठाउँहरू घुमाइन् । ठूलो हलमा विभिन्न मेडल र सम्मान–पत्रहरू । त्यहाँ नियमित सामूहिक क्रियाकलाप र बेला–बेला विभिन्न क्षेत्रका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू बोलाएर विशेष कार्यक्रमहरू गरिंदो रहेछ ।
यसको श्रोतबारे जिज्ञाशा राख्दा उनले भनिन् – “यसमा धेरै लगानी मेरा बुबा–आमाले गर्नुभएको छ । त्यसपछि सुधारका लागि आफ्ना केटाकेटीहरू राख्ने बाबु–आमा तथा अभिभावकहरूले स्वेच्छिक चन्दा दिनुहुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूबाट केही लिइँदैन । देशभित्र र देशबाहिर रहेका केही उदारमना व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूबाट दान दातव्य आउने गरेको छ । कोही भिजिटिङ्गमा आएका विदेशी व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूबाट बेला–बेला आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ र कहिलेकाही सरकारी निकायबाट पनि केही सहयोग पाइन्छ । यहाँ सडक बालबालिकाहरू पनि निकै छन्। यिनैलाई मध्यनजर गरेर आत्मनिर्भरताको लागि मोबाइल मर्मत, कुकिङ, प्लम्बिङ, बेकरी, सिलाइ–बुनाई जस्ता सीपमूलक तालिम पनि उपलब्ध गराइन्छ ।”
“अनि बिबाह गरेकी छैनौ ?” चिया–खाजा खाँदै गर्दा मैले उनलाई सोधें ।
“छैन सर ! बिबाह बारे सोचेकी छैन । कुराहरू नआएका होइनन् । तर, यो जिम्मेवारीले गर्दा त्यतातर्फ सोच्न भ्याएकी पनि छैन । पछि के हुन्छ भन्न सक्तिनँ । भरसक नगर्ने बिचारमा छु । फेरि जिम्मेवारी यहींमात्र पूरा गरेर पनि हुँदैन । यहाँबाट पुनस्र्थापनाको लागि फर्केपछि घर–परिवार र समाजमा उनीहरू के गर्दैछन् ? फेरि बिग्रिए कि ! अथवा यहाँ उनीहरूलाई सिकाए अनुसार समाजमा उदाहरणीय र आदर्श व्यक्ति पो बनेका छन् कि ! हामीले त्यहाँसम्म पनि बिचार पु¥याउनुपर्छ ।”
मैले स्वयं देखेको र उनको बारेमा उनी आफैंले सुनाएको कथा अनुसार जेनिसा यो अवस्थामा आउनु साधारण कुरो थिएन । उनी सम्पन्न बाबु–आमाकी छोरी थिइन् । अमेरिकै गएर बस्न सक्थिन् । उनमा आएको यो चेतना, यो जिम्मेवारी र यो त्यागको भावनाबाट म ज्यादै प्रभावित भएँ । बरु यत्रो पढे लेखेर, यत्रो जाने बुझेर पनि समाजको लागि केही काम गर्न नसकेकोमा उनको अगाडि आपूmलाई निकै बबुरो ठानें ।
“जेनिसा, तिम्रो यो महान् कर्मबाट म धेरै खुसी भएँ । थोरै समय भए पनि तिम्रो गुरु हुन पाएकोमा अहिले आएर गर्व बोध गरेको छु । यहाँ दुव्र्यसनीमा लागेर युवाहरू कति बिग्रिएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिको भविष्य चौपट भएको छ । फेरि तिमीजस्ता युवा–युवतीहरू यो देशमा केही हुँदैन भनेर विदेशतिर पलायन हुनेको लर्को पनि त्यति नै छ। तिमीले यो पवित्र कर्म गरेकी छ्यौ । आफ्ना गल्तीबाट सिकेर धेरै माथि उठेकी छ्यौ । तिमीबाट आजका युवा पिंढीले पाठ सिक्नुपर्छ । तिमीलाई धेरै–धेरै धन्यवाद र शुभकामना !”
यति भनेर म जानको लागि उठें ।
“हुन्छ । म सरप्रति आभारी छु । यहाँसम्म आइदिन भो । मैले गरेको काम हेरिदिनु भो । सरलाई समय–समयमा हुने विशेष कार्यक्रमहरूमा म आमन्त्रण गर्नेछु । आइदिनुपर्छ ।”
उनले दुई हात जोडेर नमस्कार गरिन् र बाटोसम्म पु¥याउन आइन् ।
म उनको कामबाट अत्यन्त प्रभावित भई मनमनै पुलकित हुँदै बाटो लागें ।
टङ्क भट्टराई (२०२७) कविता, कथा र गीतमा कलम चलाउनु हुने भट्टराईका ‘साँझमा पहिलो तारा’ (कविता सङ्ग्रह–२०६८) र ‘म पनि बग्दैछु साप्सु’ (कथा सङ्ग्रह–२०७३) प्रकाशित कृतिहरू हुन । उहाँका दर्जनबढी गीतहरू समेत रेकर्डिङ भएका छन् । विभिन्न साहित्यिक पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गर्नु भएका भट्टराईका थुप्रै फुटकर रचनाहरू प्रकाशित छन् । भट्टराईले विभिन्न साहित्यिक र अन्य पत्रपत्रिकाहरूको सम्पादन गर्नुका साथै थुप्रै साहित्यिक र गैह्र साहित्यिक संस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकासमेत निर्वाह गर्नु भएको छ ।
टाढा भएर के भो ? [ कविता ] -गंगा लिगल
साहित्यको फाँटमा मुना भण्डारीको कृति मनका छालहरु
ॐ श्रीपरमात्मने नम: । ज्योति ।
गाई अर्थात् आमा
“बुहारी आए पछि”